Otu esi echekwa koodu QR na ekwentị gị | Nzukọ mkpanaka
Otu esi echekwa koodu QR na ekwentị gị
Edere Ferreno | 07/10/2021 16:00 | android, Sistemụ arụmọrụ
Ojiji nke koodu QR bụ ihe a na -ahụkarị n'ụwa niile. Ọ bụ ihe dịka ọmụmaatụ anyị na -ahụ n'ọtụtụ ibe weebụ, ma ọ bụ na ngwa anyị na -eji na ekwentị gam akporo anyị. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ọtụtụ ndị ọrụ na -eche ụzọ ha nwere ike isi chekwaa koodu QR na ekwentị ha. Ebe ọ bụ na enwere oge anyị ga -ejirikwa ya ọzọ ọ ka mma ma ọ bụrụ na anyị chekwara ya, dịka ọmụmaatụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata kedu ka anyị ga -esi chekwaa koodu QR na ekwentị gam akporo anyị, mgbe ahụ anyị ga -agwa gị nhọrọ anyị nwere na nke a. Yabụ, ọ bụrụ na anyị ga -eji otu oge, anyị nwere ike igosi ya ngwa ngwa, ebe anyị ga -enwe ya na ngwaọrụ anyị.
Koodu QR enwetala ọnụnọ dị ukwuu, dị ka ụzọ iduzi ndị ọrụ na ibe weebụ dịka ọmụmaatụ. Site na imepe igwefoto ekwentị anyị nwere ike inyocha koodu a, a ga -enye anyị ohere ịnweta njikọ, ka anyị nwee ike nweta ibe weebụ ma ọ bụ ka anyị nwee ike budata ngwa na ekwentị, dịka ọmụmaatụ. Nke a ewu ewu emeela ka ọ dị mkpa ka anyị mara ka esi eme ha, maka na ha anaghị aga ebe ọ bụla.
Akụkụ nke ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ịchị achị bụ ụzọ ịchekwa koodu QR. Enwere oge mgbe anyị nwere ike chọọ ya ma ọ bụrụ na anyị echekwala ya na ekwentị, mgbe ahụ ọ ga -adị mfe karịa ma nwee ntụsara ahụ karịa inwe ike igosi ya ebe anyị ga -eji ya. Ndị ọrụ gam akporo nwere ọtụtụ nhọrọ n'akụkụ a.
1 Chekwaa koodu QR na gam akporo
1.1 Nseta ihuenyo
1.2 Chekwaa onyonyo koodu
1.3 Gam akporo ngwa
2 Nyochaa koodu QR
3 Kedu ihe bụ koodu QR
Chekwaa koodu QR na gam akporo
Nke bụ eziokwu enwere ọtụtụ ụzọ ị ga -esi chekwaa koodu QR na ekwentị gam akporo gị. Ha bụkwa ụzọ dị mfe n'ezie, yabụ onye ọrụ ọ bụla nọ na sistemụ arụmọrụ ga -enwe ike iji ha, ka ha wee chekwaa koodu ahụ na ekwentị wee nwee ya mgbe niile. Ịhọrọ otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ abụghị ihe dị oke mkpa, ya bụ, ha abụọ ga -arụ ọrụ nke ọma, ọ bụ ihe gbasara mmasị maka onye ọrụ ọ bụla.
Otu n'ime nhọrọ kachasị mfe anyị nwere ike ime na nke a ọ bụ naanị ịse nseta ihuenyo. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa koodu QR ahụ na gam akporo, anyị nwere ike were nseta ihuenyo nke koodu a na -ekwu, ka echekwara ya na gallery ekwentị anyị. Mgbe ọ dị mkpa, anyị nwere ike mepee njide kwuru na onye ọzọ ga -enwe ike i scanomi koodu ozugbo na enyo anyị.
Nke a bụ ihe dị mfe, ebe ọ bụ na nseta ihuenyo bụ ihe ka n'ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na gam akporo na -arụ ọrụ, yabụ na ọ gaghị ewe anyị oge dị ukwuu. Na mgbakwunye, ọ bụ ihe anyị nwere ike ime na ekwentị na mbadamba, ka onye ọrụ ọ bụla na sistemụ arụmọrụ wee nwee ike ịmalite usoro a ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ụzọ iji nweta nseta ihuenyo dịgasịtụ iche n'etiti ụdị na android. N'ime ụfọdụ a na -eme ya site na ịpị bọtịnụ ike na bọtịnụ olu na ụdị ndị ọzọ ọ bụ kpọmkwem ma ọ bụrụ na anyị pịa bọtịnụ ike na bọtịnụ olu. N'ezie ị marala ka esi eme ya na ekwentị gị, yabụ ị nwere ike were nseta ihuenyo nke koodu a. Site na mmegharị a dị mfe ị nwere ike chekwaa koodu QR na ekwentị gam akporo gị ma ọ bụ mbadamba gị.
Chekwaa onyonyo koodu
Usoro nke abụọ anyị nwere ike iji bụ nke chekwaa onyonyo nwere ọdịnaya nke koodu QR ahụ. Nke ahụ bụ, mgbe koodu ahụ pụtara na ihuenyo ekwentị, anyị nwere ike ijigide ya, mgbe ahụ menu ga -apụta na enyo ekwentị. Otu nhọrọ anyị hụrụ na nke a bụ ịchekwa onyonyo a, nke ga -enyere anyị aka ịchekwa koodu QR na ekwentị gam akporo anyị. Usoro ndị a yiri nke ịchekwa onyonyo na ekwentị, naanị na nke a anyị ji koodu ahụ mee ya.
Ihe a na -emekarị bụ na mgbe anyị chekwara koodu a na ekwentị, folda ga -apụta na foto ma ọ bụ na nchekwa ngwaọrụ. Na folda a ga -abụ ebe anyị kwuru koodu dịlarị, anyị nwere ike ịhụ ya na ihuenyo oge niile. Enwere ike ịchekwa ya na folda nbudata, mana n'ọnọdụ ndị ọzọ, a na -emepụta folda raara nye koodu ndị a ozugbo na ngwaọrụ ahụ. Yabụ ị ga -enwe ike ịchọta ha n'ụzọ dị mfe n'oge niile.
Ozugbo emere nke a, anyị ga -emerịrị ya jikọọ na ibe nwere koodu nke a na -ekwu maka ya. N'ebe ahụ, a ga -enye anyị usoro ntuziaka na naanị ihe anyị ga -eme bụ ịgbaso ha. Na mkpokọta, ọ bụ nhọrọ na -anaghị egosi ọtụtụ nsogbu, yabụ anyị nwekwara ike iji ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa koodu a na ama ma ọ bụ mbadamba gam akporo anyị.
Gam akporo ngwa
Ọtụtụ ekwentị gam akporo ma ọ bụ mbadamba ihe anaghị arụ ọrụ dị ka inyocha koodu QR.. A na -amanye ekwentị ndị a iji nweta ụfọdụ ngwa nke ha ga -enwe ike i codesomi koodu ndị ahụ ozugbo. Ngwa ndị a bụkwa ụzọ nke ịchekwa ụdị Koodu na ekwentị, opekata mpe ụfọdụ n'ime ha nwere nhọrọ nke nzọpụta a ga -ekwe omume. Yabụ, a na -egosi ha dị ka nhọrọ ọzọ ịtụle na mbadamba ma ọ bụ ekwentị gam akporo. Na mgbakwunye, enwere ike ibudata ọtụtụ ngwa ndị a n'efu na ngwaọrụ.
Na ụlọ ahịa Google Play anyị na -ahụ ọtụtụ ngwa, dị ka nyocha QR. Ngwa a anyị nwere ike ibudata na ekwentị n'efu na -enye anyị ohere inyocha koodu QR, ọrụ ya bụ isi. Agbanyeghị na ọ nwekwara ọrụ ndị ọzọ iji jikwaa ụdị Koodu na ekwentị. Otu n'ime ọrụ anyị nwere n'ime ya bụ ịchekwa koodu QR. N'ụzọ dị otu a, iji ngwa anyị ga -enwe ike chekwaa koodu na ekwentị ma ọ bụ mbadamba na -enweghị nsogbu.
Ngwa ndị a bụ ezigbo nhọrọ maka ndị ọrụ ahụ enweghị ọrụ nyocha koodu ala, ihe na -eme na ụfọdụ ekwentị gam akporo. Ekele maka ngwa ndị a, ị ga -enwe ike inyocha koodu ahụ n'oge ọ bụla, yana ịnwe nhọrọ ịchekwa ha na ngwa n'onwe ya. Ya mere, koodu ndị a ga -adị mgbe ọ bụla ha ga -achọ iji ha.
Nyochaa koodu QR
Ozugbo anyị chekwara koodu QR na ekwentịỌ ga -abụ onye ọzọ ga -enwe ike i itomi ya iji nweta webụsaịtị n'azụ ya. Nke ahụ bụ, mgbe anyị kpebiri ịchekwa koodu QR na gam akporo, ọ bụghị n'ihi na anyị ga -eji ya n'onwe anyị, kama na anyị chọrọ ka onye ọzọ nwee ike nyocha ya. Ọ gwụla ma anyị nwere ngwaọrụ abụọ, nke mere na anyị onwe anyị ga -eji ngwaọrụ nke ọzọ nyocha koodu ahụ.
Onye ọzọ ma ọ bụ ngwaọrụ iji nyochaa koodu ahụ ị ga -atụrịrị igwefoto gị na enyo anyị, ebe a ga -egosipụta koodu ahụ. Ma anyị chekwara ya site na ngwa, iji nseta ihuenyo ma ọ bụ chekwaa koodu na gallery ekwentị dị ka foto, a ga -egosipụta koodu ahụ na enyo. Ọ bụrụ na onye ahụ enweghị ọrụ i scanomi koodu obodo, ha ga -etinye akwụkwọ maka ya, dịka anyị kwuru na mbụ. Ị nwere ike tụọ ekwentị gị na koodu QR a wee pịa njikọ ahụ egosiri na enyo.
Weebụsaịtị a ga -emepe na ihe nchọgharị dị na ekwentị gị wee mezie ihe ịchọrọ na ya, ma ọ bụ naanị chọgharịa, dejupụta fọm ma ọ bụ nye iwu. N'ezie, ọ bụrụ na anyị ga -enyocha koodu QR na ekwentị gam akporo anyị, nke ga -akpọga anyị na webụsaịtị ma ọ bụ nye anyị ohere ibudata ngwa, anyị ga -enwerịrị njikọ ịntanetị oge niile, ka anyị nwee ike nweta nke ahụ. weebụsaịtị.
Kedu ihe bụ koodu QR
Dịka anyị kwurula na mbụ, ọ na -abụkarị ihe a na -ahụkarị ịhụ koodu QR na ụgbụ na akwụkwọ mmado na ndụ n'ezie. Koodu QR ndị a bụ barcodes nwere akụkụ abụọ. Acronym QR n'aha ya na -anọchite anya "nzaghachi ngwa ngwa". Ọ bụ okwu na -ezo aka na ịnweta ozi zoro ezo n'azụ ya ozugbo. Ọ bụrụ na ijirila ha, ị ga -ahụrịrị na ịnweta ozi ahụ (webụsaịtị ma ọ bụ njikọ) dị ozugbo n'oge niile, ha na -arụ ọrụ ngwa ngwa. Koodu ndị a nwekwara ike ịhazi ya, ma na imewe yana na ọrụ, ọ bụ ya mere e ji ewepụta ha dịka ngwa ọrụ dị oke mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Otu esi echekwa koodu QR na ekwentị gị
Otu esi eji Windows 10 Ram niile
Otu esi eme ma hazie njikwa nne na nna na Windows